[Review] TOP 3 kem chống nắng Cetaphil được yêu thích nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] TOP 3 kem chống nắng Cetaphil được yêu thích nhất | Muasalebang in Muasalebang
Njengamanje emakethe kunemigqa eminingi ehlukene yemikhiqizo yokuvikela ilanga, kodwa i-Cetaphil ihlale yamukelwa abesifazane. Pho kungani i-Cetaphil ithenjwa kangaka? Futhi Imikhiqizo emi-3 ephezulu ye-Cetaphil yokuvikela ilanga Iyiphi ephumelela kakhulu futhi ethenjwa abesifazane abaningi ukuyisebenzisa namuhla? Thola ngesihloko esingezansi!
1 Mayelana ne-Cetaphil sunscreen
2 I-TOP 3 esebenza kakhulu i-Cetaphil sunscreen namuhla
2.1 2.1. I-Cetaphil Daily Facial Moisturizer SPF 15 – I-sunscreen ethambisayo yazo zonke izinhlobo zesikhumba
2.2 2.2. I-Cetaphil Dermacontrol Oil Control Facial Moisturizer SPF 30 – I-sunscreen yesikhumba esinamafutha
2.3 2.3. I-Cetaphil sunscreen spf 50
3 Ungayisebenzisa kanjani i-Cetaphil sunscreen ngempumelelo kakhulu?
Mayelana ne-Cetaphil sunscreen
I-Cetaphil iwuphawu oludumile lwe-Galderma (Canada) – iqembu lezimonyo lomhlaba wonke lemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba. Kuze kube manje, i-Cetaphil ikhona emazweni angaphezu kwe-100 emhlabeni jikelele, lokhu futhi kuwuphawu olunconywe ochwepheshe abaningi.
I-Cetaphil sunscreen iwuhlobo ukuvikela ilanga Okufanelekile nokufakazelwe ngokomtholampilo ukuletha imiphumela evelele ngesikhathi sokusetshenziswa. Ikhishwe emakhambi nasezintweni zemvelo zokuthambisa nokuthambisa isikhumba esishiswe yilanga, ifaneleka kakhulu ukusetshenziswa esikhumbeni esibucayi. Ikakhulukazi kufomula yesithako se-Cetaphil sunscreen iqukethe i-esssences engasiza ukusheshisa inqubo eyinhloko ye-acne, ngakho-ke ingakwazi ukwelapha ezinye izinhlobo ezivamile ze-acne namuhla. Akuyona inketho embi uma ufuna umkhiqizo wokunakekelwa kwelanga nokunakekela isikhumba, akunjalo?
I-Cetaphil Sunscreen – umkhiqizo ovikela kokubili elangeni futhi onakekela isikhumba sakho
I-Cetaphil Sunscreen inikeza ifomula engu-3-in-1 esiza ukulawula uwoyela, ukugqama, nokuhlinzeka ngomswakama obalulekile ukulwa nemisebe ye-UV eyingozi. Ukuvikelwa kwelanga okuphakeme okudizayinelwe ngokukhethekile isikhumba esinamafutha kanye nezinduna ngenxa yobuchwepheshe be-Oleosome ngokuvikela okuphelele kwe-UVB/UVA.
I-Cetaphil sunscreen usizo ngesikhumba esomile esibangelwa imithi ethile kadokotela yezinduna oyisebenzisile. I-Cetaphil enezinzuzo ezivelele isiza ukungena ngokushesha ebusweni besikhumba, ayinamanzi, ayinamafutha futhi ikhanyisa isikhumba.
I-TOP 3 esebenza kakhulu i-Cetaphil sunscreen namuhla
Imiphi imikhiqizo enayo i-Cetaphil, ifomula, izinzuzo kanye nokubi zohlobo ngalunye. Ake sithole isihloko Ukubuyekezwa kwe-sunscreen ye-Cetaphil baziswa kakhulu futhi bathandwa abesifazane abaningi namuhla.
2.1. I-Cetaphil Daily Facial Moisturizer SPF 15 – I-sunscreen ethambisayo yazo zonke izinhlobo zesikhumba
I-Cetaphil Moisturizer SPF 15 ifaneleka kuzo zonke izinhlobo zesikhumba futhi ayibangeli ukucasuka kwamehlo, umkhiqizo ufanelekile ukusetshenziswa kwansuku zonke isikhathi eside. Isiza ukuvikela elangeni futhi ibuyisele umswakama wansuku zonke, ofanele isikhumba esivamile kuya esinamafutha. Ukuvimbela ama-ejenti ayingozi emvelo, ukuvikela ubuqotho besikhumba, ngakho-ke kukhathazeka kakhulu ngabesifazane abaningi.
Izithako: Amanzi, i-Diisopropyl Adipate, i-Cyclomethicone, i-Glyceryl Stearate, i-PEG-100 Stearate, i-Polymethyl Methacrylate, i-Phenoxyethanol, i-Benzyl Alcohol, i-Acrylates/C10-30 i-Alkyl Acrylate Crosspolymer, i-Tocopheryl Acetate, i-Acetate 90.
Isiza ukuvikela isikhumba, i-sunscreen kanye nokubuyisela umswakama nsuku zonke, ilungele zonke izinhlobo zesikhumba.
Ukuzinza okuphezulu nge-Parsol 1789 kanye ne-Octocrylene: ukuvikela okuphakeme ngokumelene ne-UVA ne-UVB, okusiza ukulondoloza ubuqotho besikhumba.
Inezici zokuthambisa, ithatha ngokushesha, ayibangeli ukuthi isikhumba sizizwe sinamafutha.
Inzuzo: Ikhono lokwandisa umswakama, ukulawula ngempumelelo i-sebum, usize isikhumba sihlale sithambile, sibushelelezi, sinciphise ukoma.
Isici: Imikhiqizo yokuvikela ilanga ene-SPF 15+ kufanele ibe manzi kakhulu, uma kufanele ubekwe elangeni isikhathi eside, awukwazi ukusebenzisa lo mkhiqizo.
Inombala omhlophe onjenge-milky ngesimo se-lotion, ngakho-ke ingena ngokushesha esikhumbeni ngaphandle kokubangela noma yikuphi ukunamathela. Ukhilimu awunambala, awunaphunga, awunaparaben. Nakuba kuwumkhiqizo oyinhlanganisela, ukalwe kakhulu ukuze uvikeleke kuyo yomibili imisebe ye-UVA ne-UVB. Ifanele zonke izinhlobo zesikhumba.
I-Moisturizer SPF 15 ine-SPF enesizotha ye-PA + engu-15 kuphela, ngakho iphephe kakhulu futhi ifanele ukuvikelwa kwansuku zonke kwesikhumba.
Lona futhi umkhiqizo okhangayo ngokwedlulele kwabesifazane basehhovisi ngoba uhlale unikeza umswakama, usiza isikhumba ukugwema imisebe eyingozi evela ezibani zekhompyutha nezibani.
Ukubukeka okusha Ibhodlela likakhilimu othambisayo elinomthamo ongu-40z=118ml, ibhodlela lepulasitiki elimhlophe elinekepisi eliluhlaza okwesibhakabhaka (elidala limhlophe), liqinile futhi licocekile.
Ebhodleleni ngalinye, kuzoba nayo yonke imininingwane edingekayo yomkhiqizo kusuka kuzithako ozozisebenzisa nokusetshenziswa.
Idizayini yombhobho wesifutho yenza kube lula ukuthola ukhilimu futhi isiza ukulondoloza ukhilimu kangcono, usize ukukhawulela ukuxutshwa kwe-oxidation lapho uchayeke emoyeni.
Gcina: Gwema izindawo ezichayeke elangeni eliqondile, izindawo ezomile ezinomswakama omncane.
2.2. I-Cetaphil Dermacontrol Oil Control Facial Moisturizer SPF 30 – I-sunscreen yesikhumba esinamafutha
I-sunscreen Moisturizer SPF 30 isiza ekulawuleni i-sebum, inciphise ukuphuma kukawoyela futhi inciphise ukugqama kwesikhumba. Ubuchwepheshe be-Ceramide bunamandla okufaka amanzi ngokushesha esikhumbeni, ukubuyisela umgoqo wokuzivikela, futhi usize isikhumba sibe bushelelezi. I-SPF 30 ehlanganisiwe ivimbela imiphumela ye-UVA/UVB namathonya emvelo ekugugeni.
I-Glycerin: iyisithako esihlala sikhona emigqeni yomkhiqizo we-moisturizer, basebenzela ukulondoloza umswakama wesikhumba ekumisweni.
I-Panthenol (B5): Ikhuphula izinga lokuswakama kwesikhumba futhi idale umgoqo ovikelayo ukuvikela isikhumba ethonyeni elibi lemvelo.
I-Vitamin E: Isiza ukugcwalisa imisoco ebalulekile esikhumbeni.
I-Allantoin: Iyinhlanganisela elwa nokuvuvukala, ekhawulela ukucasuka, ivikela futhi ivuselele ukugwema ukulimala esikhumbeni.
I-Aloe Vera: Isithako esiza ukulwa nokuguga kwesikhumba.
Lo mugqa wokuvikela ilanga awunawo utshwala, iphunga elimnandi noma uwoyela wamaminerali kufomula, ngakho-ke kuphephe kakhulu ukuthi isikhumba sisetshenziswe.
Izithako zemvelo, eziphephile, ezingenawo amaParabens.
Ukhilimu ubushelelezi futhi ulula, usheshe ungene esikhumbeni.
I-moisturizing kakhulu, i-SPF 30 yokuvikela ilanga.
Ikhono eliphezulu lokulawula uwoyela lisiza isikhumba ukuthi singabi namafutha, sinciphise izinduna.
Idala isiphetho esibushelelezi.
Inkomba yokuvikela ilanga ephansi, ayifanele labo abavame ukwenza imisebenzi yangaphandle.
Ngenxa yezithako eziphezulu zokuthambisa, izozizwa inamafutha uma isetshenziswa.
Ngemibala emibili eyinhloko kukhona onsomi nomhlophe.
Ibhodlela lePlastiki elinembobo yesifutho yendawo yonke lenza kube lula ukulisebenzisa.
Emzimbeni ngamunye webhodlela kanye negobolondo, kunezithako ezibhalwe ngokucacile kanye nokusetshenziswa.
Uketshezi, olumhlophe futhi lukhanya kakhulu. Kulula ukusabalala futhi kungene ngokushesha esikhumbeni lapho isetshenziswa.
Umkhiqizo unephunga elipholile futhi cishe awunaphunga.
Lo mugqa uma usetshenziswa esikhumbeni, ukhilimu usakazeka ngokulinganayo, ubushelelezi futhi udonswa ngokushesha.
Ngenxa yokuthi i-sunscreen moisturizer, umkhiqizo unomswakama kakhulu.
Gcina: Ungashiyi izindawo zivezwe elangeni eliqondile.
2.3. I-Cetaphil sunscreen spf 50
I-Defence SPF 50+ inenkomba ephezulu yokuvikela ilanga, isikhuseli selanga esingasetshenziswa lapho ubamba iqhaza emisebenzini yangaphandle, ukubhukuda, … Mayelana nokuvikelwa kwe-UVA ngaphezu kwe-Avobenzone, kunezinto ezi-3 ezivikela i-UVA futhi. I-Tinosorb, i-Mexoryl ne-Titanium Dioxide. Sekukonke, bobathathu baphakathi kwezithako ezihamba phambili zokuvimbela i-UVA emakethe namuhla.
I-Uvinul t150 iyisithako esisebenzayo sesizukulwane esisha esilwa ne-UV.B, esincibilikayo kuwoyela futhi sizinze ngokwedlulele ngaphansi kokukhanya. Le nto iklelisa endaweni yesi-2 kububanzi bokuvikela okungcono kakhulu, kuphela ngemuva kwe-Uvasorb HEB. I-Ti02 iyisikhilimu selanga esisebenzayo esivikela kukho kokubili i-UVB ne-UVA.
Ngokuvikelwa kwe-UVA kusetshenziswa inani lezithako ezisebenzayo ezifana nalezi: Tinosorb S, Mexoryl SX/XL ne-Titanium, ikakhulukazi i-Tinosorb S inokuvikela okuvelele ngawo wonke amaza obude, i-Ti02 inikeza ukuvikelwa kwelanga okufanayo kuwo wonke amabhendi.
Okokugcina, i-Cetaphil UVA/UVB Defense inesici esiphezulu sokuvikela ilanga nge-SPF50 kanye ne-UVA 28 elingana ne-PA+.
I-alkalinity kawoyela inhle impela, ubuso buhlanzekile futhi bomile usuku lonke futhi buthela amafutha amancane kuphela endaweni ye-T.
Ukuvikelwa kwelanga okuhle, ukumuncwa okusheshayo.
Ifanele zonke izinhlobo zesikhumba futhi ingasetshenziswa emzimbeni.
Ukushiya ifilimu emhlophe esikhumbeni, uma unombala omnyama wesikhumba, uzokwenza ithoni yakho yesikhumba ingalingani phakathi kwentamo nobuso. Uma usebenzisa, kufanele usebenzise ukhilimu endaweni yentamo.
Ukhilimu: Ngokufana nomkhiqizo ongenhla, kodwa lo mkhiqizo une-SPF engu-30, ngakho ukuvikela ilanga kuphakeme. Lo mugqa ulula esikhumbeni, uthatha ngokushesha, awuzizwa unamafutha noma ucwebezela, ikakhulukazi uphakamisa kancane ithoni.
Ukupakishwa: Idizayini yeshubhu ehlangene kulula ukuyiphatha lapho uhamba noma noma kuphi, kusenemibala emibili eyinhloko yomkhiqizo omhlophe noluhlaza. Ulwazi oludingekayo luphrintiwe ngaphandle kwebhodlela ngalinye nesiqukathi.
Into ekhilimu: Uketshezi, olumhlophe futhi lukhanya kakhulu. Kulula ukusabalala futhi kungene ngokushesha esikhumbeni lapho isetshenziswa. Umkhiqizo unephunga elipholile futhi cishe awunaphunga.
Gcina: Ungashiyi izindawo ezichayeke elangeni eliqondile, gwema izindawo ezinomswakama ophezulu.
Ungayisebenzisa kanjani i-Cetaphil sunscreen ngempumelelo kakhulu?
Ngomugqa ngamunye wemikhiqizo yezimonyo, kuzoba nokusetshenziswa okuhlukile namanothi. Nge-sunscreen, futhi, ukuze kuzuzwe umphumela omuhle kakhulu, indlela yokusebenzisa umkhiqizo ngempumelelo nangokufanele. Izinto ezilandelayo zizokusiza ngokwengxenye ukuthi uqonde indlela yokusebenzisa i-Cetaphil sunscreen ngendlela enemininingwane nephelele.
Hlanza isikhumba ngezihlanzi ezikhethekile zesikhumba, usiyeke some, bese ugcoba i-Cetaphil sunscreen.
Ukulandelana kwezinyathelo: Faka inani elifanele likakhilimu entendeni yesandla sakho.
Okulandelayo, sebenzisa ngobumnene ebusweni bese ugcoba ngobumnene ukhilimu ebusweni, uqaphele ukuthi ungawutholi ukhilimu emehlweni.
Ngemva kokugcoba i-sunscreen ebusweni bakho nasentanyeni, linda cishe imizuzu engu-15 ngaphambi kokuzibeka elangeni. Ukwandisa ukusebenza kwe-sunscreen kanye nokwelashwa kwama-acne, udinga ukusisebenzisa njalo emahoreni ama-2 uma ubhekene nelanga kakhulu.
Amanye amanothi uma usebenzisa:
Uma usebenzisa i-sunscreen, ungasisebenzisi eduze nendawo yamehlo. Nakuba kungenabungozi emehlweni, kodwa amanye amakhambi asiza ukwelapha induna kanye ne-anti-greasy kukhilimu azokwenza amehlo alume.
Nakuba ikhiqizwa ngezindinganiso zokuphepha, ayibangeli ukucasuka kwazo zonke izinhlobo zesikhumba, kodwa izingane ezingaphansi kwezinyanga ezingu-6, zithintane nodokotela ngaphambi kokunquma ukusebenzisa i-Cetaphil sunscreen.
Ihlobo liyashisa, ungakhathazeki ngoba selikhona I-Cetaphil sunscreen, ngezinketho eziningi ezifanele uhlobo ngalunye lwesikhumba. Usalindeni, ungazilungiseleli ukuzithengela i-Cetaphil ukuze ikuphelezele ukuze uchithe ihlobo elipholile, elinelanga nelinomoya.
5+ Cách Khắc Phục Laptop Không Nhận Bàn Phím Rời HIỆU QUẢ | Muasalebang